Somali – S63 Productions
Dowladda Tansaaniya ayaa soo saartay tilmaamo cusub oo ku saabsan cudurka loo yaqaan 'coronavirus', oo ay ka mid tahay muddo 14 maalmood ah oo karantiil ah oo loogu talagalay dadka imaanaya dalka. Tallaabadani waxay khuseysaa ajaanibta iyo muwaadiniin ...
Bill iyo Melinda Gates ayaa ku dhawaaqay in ay kala tageen 27 sano kadib oo ay is qabeen. Markii ugu horreysay waxay kulmeen 1980s markii Melinda ay ku biirtay shirkadda Microsoft ee Bill. Lamaanaha bilyaneerka ah waxay leeyihiin seddex caruur ah w ...
Manchester United ayaa dhibaato hor leh u geysatay rajadii Tottenham ee ka mid noqoshada afarta sare ee Premier League madaama ay gadaal ka yimaadeen si ay u gaaraan guul ay u qalmeen. Spurs ayaa ciyaartay iyada oo og in guushu ku sii hayn doonto boos ...